မောင်မြတ်သူရိန်ဇော်၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်မောင်မြတ်သူရိန်ဇော်'s ၏ 'မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးနှင့်စပ်လျဉ်း၍' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်မောင်မြတ်သူရိန်ဇော်'s ၏ 'မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးနှင့်စပ်လျဉ်း၍' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်မောင်မြတ်သူရိန်ဇော်'s ၏ 'သင်္ဂဇာ ဆရာတော်၏ သိင်္ဂါလောဝါဒ ဆုံးမစာများ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
phyuthi သည်မောင်မြတ်သူရိန်ဇော်ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
မောင်မြတ်သူရိန်ဇော် shared မောင်အေးချမ်း's blog post on Facebook
** ဘုရား ၊ ရဟန္တာတို့ စုတိပျက်ကြွေ သေလွန်ပြီးသော် **
မောင်မြတ်သူရိန်ဇော် သည်မောင်အေးချမ်း's ၏ '** ဘုရား ၊ ရဟန္တာတို့ စုတိပျက်ကြွေ သေလွန်ပြီးသော် **' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
မောင်မြတ်သူရိန်ဇော် joined အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s group
မောင်မြတ်သူရိန်ဇော် shared A BuddhismworldAdmin's group on Facebook
မောင်မြတ်သူရိန်ဇော် သည် A BuddhismworldAdmin's ၏ 'ဘုရားရှိခိုးရန်နေရာဌာန' အဖွဲ့တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
မောင်မြတ်သူရိန်ဇော် joined A BuddhismworldAdmin's group
မောင်မြတ်သူရိန်ဇော် သည် thein wai's၏ 'ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
မောင်မြတ်သူရိန်ဇော် shared BABY-ROAD-MAP's blog post on Facebook
မောင်မြတ်သူရိန်ဇော် သည် BABY-ROAD-MAP's၏ 'ဗုဒ္ဓဥာဏ်တော်ကို ဝေဖန်သော ဘာသာခြား'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဒီဘလော့ကို ဇွန် 20, 2015 တွင်6:33pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
လမ်းခရီးကို ပါဠိလို မဂ္ဂ-ဟု ခေါ်ပါသည်။ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန် ရောက်ရန်အကြောင်း ကောင်းမြတ်သော လမ်းစဉ်ဖြစ်သောကြောင့် မဂ္ဂရှစ်ပါး မြတ်တရားကိုလည်း မဂ္ဂ-ဟု ခေါ်ပါသည်။ ထိုမဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန် ရောက်ရန်အကြောင်း လမ်းစဉ်ကောင်း၏ အစိတ်အပိုင်း အင်္ဂါရှစ်ပါးကို မဂ္ဂ+အင်္ဂ=မဂ္ဂင်္ဂ=မဂ္ဂင်-ဟု ခေါ်ပါသည်။
(၅) သမ္မာအာဇီဝမဂ္ဂင်= မှန်ကန်သော…
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 12, 2012 တွင်2:40pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းလိုလို ကလေးလူကြီးမကျန် နမောတဿ ဘုရားရှိခိုးကို ဆိုတတ်ကြသည်။သို့ဖြင့် သီလယူသည့အခါ၊ဘုရားရှိခိုးသည့်အခါ၊စာပေပို့ချ သင်အံ့သည့်အခါ စသည်တို့၌ နမောတဿ ကိုရွတ်ဆိုရှိခိုး ကြသလို မင်္ဂလာအခမ်းအနား စသည်တို့ကျင်းပသည့်အခါ၌လည်း နမောတဿ ဘုရားရှိခိုးဖြင့် အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်လေ့ရှိကြသည်။
နမောတဿတွင် ဗုဒ္ဓ၏ဂုဏ်တော် ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မာသမ္ဓုဒ္ဓဿ ဟူ၍ သုံးပုဒ်ပါသည်။ နမောတဿကို ရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်-
၂။ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းများ အန္တရာယ် မရှိဘဲ ပြီးခြင်း၊
သင်္ဂဇာ ဆရာတော်၏ သိင်္ဂါလောဝါဒ ဆုံးမစာများ
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 6, 2012 တွင်1:25am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments2Likes
ကျွေးမွေးမပျက် ဆောင်ရွက်စီမံ မွေခံထိုက်စေ လှူမျှဝေ၍ စောင့်လေမျိုးနွယ် ၀တ်ငါးသွယ် ကျင့်ဖွယ်သားတို့သာ။
မကောင်းမေတ္တာ ကောင်းရာညွှန်လတ် အတတ်သင်စေ ပေးဝေနှင်းရင်း ထိမ်းမြှားခြင်းလျှင် ၀တ်ငါးအင် ဖခင်မယ်တို့သာ။
ညီညာထကြွ ဆုံးမနာယူ လာမူကြိုဆီး ထံနီးလုပ်ကျွေး သင်တွေးအံရွတ် တပည့်ဝတ် မချွတ်ငါးခုသာ။
အတတ်လည်းသင် ပဲ့ပြင်ဆုံးမ သိပ္ပမချန် ဘေးရန်ဆီးကာ သင့်ရာအပ်ပို့ ဆရာတို့…
အနရိယ ဝေါဟာရမျိုး ၈-ပါး
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 4, 2012 တွင်6:22pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment 1 Like
အနရိယ ဝေါဟာရမျိုး ၈-ပါး။ ။ အရိယာမဟုတ်သူတို့၏ စကားမျိုးရှစ်ပါး။
(၁) အ ဒိဋ္ဌေ ဒိဋ္ဌ ၀ါဒိတာ- မမြင်သည်ကို အမြင်လုပ်၍ပြောခြင်း၊
(၂) အသုတေ သုတ၀ါဒိတာ- မကြားကို အကြားလုပ်၍ပြောခြင်း၊
(၃) အ မုတေ မုတ ၀ါဒိတာ- မထိကိုအထိလုပ်၍ပြောခြင်း၊
(၄) အ ၀ိညာတေ ၀ိညာတ ၀ါဒိတာ- မသိကို အသိလုပ်၍ပြောခြင်း၊
(၅) ဒိဋ္ဌေ အ ဒိဋ္ဌ ၀ါဒိတာ- အမြင်ကို မမြင်လုပ်၍ပြောခြင်း၊
(၆) သုတေ အ သုတ ၀ါဒိတာ- အကြားကို မကြားလုပ်ပြောခြင်း၊
(၇) မုတေ အ မုတ ၀ါဒိတာ- အထိကို မထိလုပ်ပြောခြင်း၊
(၈) ၀ိညာတေ အ ၀ိညာတ ၀ါဒိတာ-အသိကို…
9:30pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 28, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:13am အချိန်ဇန်န၀ါရီ 28, 2013, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:53am အချိန်ဇွန် 21, 2012, တွင် လင်းကိုကို မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မဂ္ဖင်ရှစ်ပါး အသုံးပြုနည်း..သိရန် အချက်များ.
(၁) ဥာဏ် ဆိုတာကို သိရပါမယ်.
ဥာဏ်ဆိုသည်မှာ ဝေဖန်ပိုင်းခြားတက်ခြင်းကို ဥာဏ်ဟုခေါ်ပါသည်.
(၂)ဘာတွေကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားမလည်း လို့မေးရင်.
အကြောင်း အကျိုး အကောင်းအဆိုး အမှားအမှန်တွေကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်းပါ.
(၃) သတိ ဆိုတာကို သိရပါမယ်.
သတိ ဆိုသည်မှာ စောင့်ကြည့်ခြင်း.
ဘာတွေကို စောင့်ကြည့်မလည်းလို့ မေးရင်.
အာရုံတွေကနေတဆင့် သိလာတဲ့ အသိတွေကို စောင့်ကြည့်ခြင်းပါ..
(၄)ကာယကံ ၀စီကံ မနောကံ တွေကိုသိရပါမယ်.
ကိုယ်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း နှုတ်ဖြင့် ပြောဆိုခြင်း စိတ်ဖြင့် ကြံတွေးခြင်း စတဲ့ နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေသော ကံတွေကို
(၅) အလုပ်ရဲ့ သဘောတရားတွေကို သိရပါမယ်.
အလုပ်ရဲ့ သဘောတရားဆိုသည်မှာ အလုပ်တိုင်းတွင် ပါရှိသော အင်္ဂါရပ်များကို သတိထားကာ ဥာဏ်ဖြင့်
အလုပ်တိုင်းတွင် ပါရှိသော အင်္ဂါရပ်များ..
(a)မပြုလုပ်ခင် ကြံစည်ခြင်း အကြောင်း..(ဆက်စပ်ခြင်း သဘော)
(b)ပြုလုပ်နေစဉ် အကောင်းအဆိုး အမှားအမှန် (ဒွန်တွဲခြင်း သဘော)
(c)ပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုး..(ဆက်စပ်ခြင်း သဘော)
(၆) ဆက်စပ်ခြင်း နှင့် ဒွန်တွဲခြင်းကို သိရပါမယ်.
ဆက်စပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ တစ်ခုပြီးမှ တစ်ခုဖြစ်ခြင်း... ဒွန်တွဲခြင်း ဆိုသည်မှာ နှစ်ခု တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြစ်ခြင်း
(၇) အကျင့် အကြေင်း သိရပါမယ်.
အကျင့် ဆိုသည်မှာ ထပ်ကာတလဲလဲပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာသော အကျိုးတရား.တစ်နည်း မျက်စိ နား နှာခေါင်း
လျှာ ကိုယ် စိတ်ဟူသော အိနြေ္ဒခြောက်ပါးကို လိမ္မာယဉ်ကျေးစေရန် လေ့ကျင့်ခြင်း.ကာယကံ ၀စီကံ မနောကံ
အထက်ပါ အကြောင်းအရာတို့ကို သိရှိပြီးသော အခါ နေ့စဉ် မိမိတို့ စားဝတ်နေရေးအတွက် မည်သည့် အလုပ်
မဆို လုပ်နေရင်း သတိကို သုံးသော အလေ့အကျင့်တို့ များလာသောအခါ မိမိ အသိများကို မဂ္ဖင်ရှစ်ပါး နှင့်
တိုက်ကြည့်ကာ မည်မျှ အသုံးဝင်သည်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်..
11:37am အချိန်ဇွန် 8, 2012, တွင် လင်းကိုကို မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
နံနက်ရောင်ခြည်လင်းနေပြီဆို ရုန်းကန်လှုပ်ရှား အိုလူသားတို့. စားဝတ်နေရေး ဦးစားပေးကာ သွားလာလှုပ်ရှား. သတိမထားသော် အသိတရားတို့သည် သုညသာလျှင်ဖြစ်လိမ့်မည်. ထိုသုညတို့ များစွာ ရှိလည်း တန်ဖိုးမရှိ သင်သိသင့်၏.
ကိန်းပြည့်များနှင့် ပေါင်းစပ်ပါမူ ထိုသုညသည် များစွာ တန်ဖိုးမြင့်လေသည်. အသိများကာ သုည ဆိုလျှင် ကိန်းပြည့်များမှာ အဘယ်နည်း. တစ်ခြားမဟုတ် သတိနှင့် ဥာဏ် အမှန်ပင်လျှင် ကိန်းပြည့်များပင်ဖြစ်တော့သည်. ထိုကိန်းပြည့်များ သုံးတက်ပါမူ နေ့စဉ်ဘ၀ သုညများကား တန်ဖိုးအလွန်မြင့်တော့သည်.
ဥပမာ....(၁) ၀၀၀၀၀၀၀၀ (၂) ၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀......
နေ့စဉ် လှုပ်ရှား လူအများတို့ မျက်စိဖြင့်လည်း မြင်သိ၏ နားဖြင့်လည်းပဲ ကြားသိ၏ နှာခေါင်းဖြင့်လည်း နမ်းရူသိ၏ လျှာဖြင့်လည်းပဲ အရသာ သိ၏ ကိုယ်ဖြင့်လည်းပဲ ထိတွေ့ သိ၏ စိတ်ဖြင့်လည်းပဲ ကြံတွေး သိ၏.
ထိုအသိတို့သည်ကား သုညများပင်ဖြစ်ပေသည်.မိမိ၏ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ရေးသားခြင်းနှင့်တူ၏.
ထိုသုညတို့၏ ရှေ့တွင် ကိန်းပြည့်များကို ရေးခြင်းသည်ပင် သုညများသည် တန်ဖိုးပြောင်းလဲလေသည်.
နေ့စဉ် အသိတရားတို့အား နှလုံးသွင်းမှန်မှန်ဖြင့် သတိနှင့် ကြည့် ဥာဏ်နှင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြား ဆင်ခြင်ခြင်းသည်ပင်လျှင်
သုညများ၏ရှေ့တွင် ကိန်းပြည်များထားခြင်းနှင့် တူပေသည်.
4:50pm အချိန်မေ 18, 2012, တွင် သဒ္ဓါဖြူ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မောင်လေးရေ အမရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ထားတတ်ပါစေပို့စ် မှမဟုတ်ပါဘူး ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်မှာ ဘယ်ပို့စ်ကိုမဆို လွတ်လပ်စွား share နိုင်ပါတယ်နော်၊ ခွင့်ပြုပါတယ်ရှင်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ အတွက် များများဖတ်ကြလို့ များများသိရင် အမတို့တွေ ၀မ်းမြောက်မိမှာအမှန်တကယ်ပါရှင်...........
5:01pm အချိန်ှဧပြီ 26, 2012, တွင် ကြယ်စင်လင်းလက်လှိုင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
6:15pm အချိန်ှဧပြီ 25, 2012, တွင် ကြယ်စင်လင်းလက်လှိုင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်...အလင်းလဲ လေ့လာဆဲပါ ဘာမှတော့ သိပ်မသိသေးပါဘူးးး:)
6:59pm အချိန်ှဧပြီ 18, 2012, တွင် လင်းကိုကို မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
8:10pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 13, 2012, တွင် Moe မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
10:11pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။